၅၀၀၀ စားမြားရဲ့ ကဆြုံးခနျး…. – Shwe Likes
G Shwe | February 25, 2021 | Local News | No Comments
5000 စား Mission Failed တယျလို့ပွောလို့ ရသှားပါပွီ…
အခြို့…နယျစှနျန ယျဖြားက လူတှကေို..ဘုရားဖူးပို့ပေးမယျ ဆိုပွီး…ချေါလာတယျလို့ထှကျဆိုသှားပါတယျ..သူတိူ့လညျးတျောတျောလနျ့နပေါတယျ…ပွနျသှားကွပါပွီ…အကွမျးဖကျအုပျစုကလညျး…အဖမျးခံရသူနဲ့.. ရဲလကျအပျခံရသူနဲ့….ကှဲကုနျပါပွီ..
လကျလှနျပွီး…ကားမှနျခှဲ တဲ့သူတှကေိုလညျး…ဖမျးပွီး…အလြျောတောငျးနပေါတယျ..အတူပါလာသူတှကေ…ဘာမှ.လှညျ့မကူပါဘူး… သိမျဖွူမှာ…..ပွညျသူတှကေ…အကွမျးဖ ကျသမားတှကေို. ..ဖမျးဆီးထိမျးသိနျးထား ပါတယျ..
အဲ့တာကို…လာပွနျထုတျသူက…ကွံ့ဖှံ ကပါ..မွို့နယျ ဥက်ကဌလို့ပွောပါတယျ..အဲ့တာလညျး…မီဒီယာမှာ ပုံနဲ့တကှပါလာပါပွီ….အကွမျးဖကျသူတှမှော…စဈမှုထမျးဟောငျးအဖှဲ့ဝငျတှပေါတယျ ဆိုတာလညျး.. သကျသခေံ ကတျတှနေဲ့တကှ…မီဒီယာမှာပါလာပါပွီ…
ကမ်ဘာ့ မီဒီယာတှကေလညျး…အခြိနျနဲ့တပွေးညီ..သတငျးမှနျကိုဖျောပွနကွေပါတယျ…လူငယျတှဖေကျက အနညျးငယျပဲ..ထိခိုကျမှုရှိခဲ့ပါတယိ..ရှောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ..
ဓားထိုးခံရတဲ့…အဈကို မသပေါ…စာရငျးစာအုပျကပြောကျလို့…အိမျပွနျရငျ..စာရငျးရှငျးတဲ့အခါ..ပွသနာလညျး…တကျကွပါလိမျ့ဦးမယျ..ခေါငျးပုံဖွတျစားထားတာတှလေညျး…ပျေါသှားပါပွီ..ရဲတှေ ဘယျလိုကိုငျတှယျတယျဆိုတာလညျး..
ကမ်ဘာ့ မီဒီယာတှမှော ပါလာပါပွီ..ပိုဆိုးသှားတာက…နောကျရကျအေးခမျြးစှာဆန်ဒပွသူတှကေို…..ရဲတပျဖှဲ့က…အကွမျးဖကျကိုငျတှယျရငျ….တဈနိုငျငံလုံးသာမက..တဈကမ်ဘာလုံးကပါ….ပုံတှယှေဉျပွ ပွီး မေးခှနျးထုတျတော့မှာပါ…
5000 စား Mission Failed တယ်လို့ပြောလို့ ရသွားပါပြီ…
အချို့…နယ်စွန်န ယ်ဖျားက လူတွေကို..ဘုရားဖူးပို့ပေးမယ် ဆိုပြီး…ခေါ်လာတယ်လို့ထွက်ဆိုသွားပါတယ်..သူတိူ့လည်းတော်တော်လန့်နေပါတယ်…ပြန်သွားကြပါပြီ…အကြမ်းဖက်အုပ်စုကလည်း…အဖမ်းခံရသူနဲ့.. ရဲလက်အပ်ခံရသူနဲ့….ကွဲကုန်ပါပြီ..
လက်လွန်ပြီး…ကားမှန်ခွဲ တဲ့သူတွေကိုလည်း…ဖမ်းပြီး…အလျော်တောင်းနေပါတယ်..အတူပါလာသူတွေက…ဘာမှ.လှည့်မကူပါဘူး… သိမ်ဖြူမှာ…..ပြည်သူတွေက…အကြမ်းဖ က်သမားတွေကို. ..ဖမ်းဆီးထိမ်းသိန်းထား ပါတယ်..
အဲ့တာကို…လာပြန်ထုတ်သူက…ကြံ့ဖွံ ကပါ..မြို့နယ် ဥက္ကဌလို့​ပြောပါတယ်..အဲ့တာလည်း…မီဒီယာမှာ ပုံနဲ့တကွပါလာပါပြီ….အကြမ်းဖက်သူတွေမှာ…စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ် ဆိုတာလည်း.. သက်သေခံ ကတ်တွေနဲ့တကွ…မီဒီယာမှာပါလာပါပြီ…
ကမ္ဘာ့ မီဒီယာတွေကလည်း…အချိန်နဲ့တပြေးညီ..သတင်းမှန်ကိုဖော်ပြနေကြပါတယ်…လူငယ်တွေဖက်က အနည်းငယ်ပဲ..ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယိ..ရှောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်..
ဓားထိုးခံရတဲ့…အစ်ကို မသေပါ…စာရင်းစာအုပ်ကျပျောက်လို့…အိမ်ပြန်ရင်..စာရင်းရှင်းတဲ့အခါ..ပြသနာလည်း…တက်ကြပါလိမ့်ဦးမယ်..ခေါင်းပုံဖြတ်စားထားတာတွေလည်း…ပေါ်သွားပါပြီ..ရဲတွေ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်တယ်ဆိုတာလည်း..
ကမ္ဘာ့ မီဒီယာတွေမှာ ပါလာပါပြီ..ပိုဆိုးသွားတာက…နောက်ရက်အေးချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေကို…..ရဲတပ်ဖွဲ့က…အကြမ်းဖက်ကိုင်တွယ်ရင်….တစ်နိုင်ငံလုံးသာမက..တစ်ကမ္ဘာလုံးကပါ….ပုံတွေယှဉ်ပြ ပြီး မေးခွန်းထုတ်တော့မှာပါ…